နိုင်ဂျီးရီးယားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဥပဒေခိုင်မြဲသော:7ကျနော်တို့တင်ပို့သူများနှင့်ကမ်းလွန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ကိုဖွင့်ဖို့ကိုကူညီပါနည်းလမ်းများ - နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ဥပဒေခိုင်မြဲသော - Lawyers in Nigeria.
ပိုငျသညျကိုတင်ပို့, ပိုငျသညျထုတ်လုပ်ရန်, ပိုငျသညျအမြတ်အစွန်းဖြစ်လာ! ပညတ္တိကျမ်းလက်သမား, LLP. (နိုင်ဂျီးရီးယားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ) ထုတ်လုပ်သူနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်လုပ်ဆောင်နေသည်, တင်ပို့သူ, နှင့်နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ဖောက်သည်ဖြန့်ဖြူး. အထူးသ, ကျနော်တို့န်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးနှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်, အပါအဝင်:
သင်နိုင်ဂျီးရီးယားစျေးကွက်ဝင်ကူညီပေးဖို့, ငါတို့သည်သင်တို့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအပေါ်စည်းမျဉ်းတွေကိုဘယ်လို navigate လုပ်အပေါ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းညွှန်မှုပေး, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွဲ့စည်းရေး, အခွန်ဌာန, နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ကုန်သွယ်မှု, ဥာဏ်ပညာဖြင့်တီထွင်ဖန်တီးထားသောအရာ, ရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြား, အခွန်ကောက်ခြင်း, စသည်တို့ကို. ကျနော်တို့နောက်ထပ်စာချုပ်ညှိနှိုင်းမှုနှင့်ဘက်တော်သား၌သင်တို့၏အကျိုးစီးပွားကိုကိုယ်စားပြုနိုင်ပါတယ်, ဖက်စပ်နှင့်မိတ်ဖက်, ဥပဒေရေးရာစာရွက်စာတမ်းများ၏စုံလင်ခြင်း, အစိုးရမက်လုံးပေး၏ဝယ်ယူ, ကုမ္ပဏီအတွင်းရေးမှူးန်ဆောင်မှုများ, စီမံကိန်းအတွက်ဘဏ္ဍာရေး, ကြွေးမြီပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး, အကြွေးရောင်းအား, ကြွေးမြီပြန်လည်နာလန်ထူ, Non-အရည်အချင်း, အလုပ်, နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှု, ကြောင့်လုံ့လဝီရိယနှင့်ဥပဒေရေးရာလိုက်နာမှုကိစ္စများ.
ဖတ်ရန်: နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ဘယ်လိုနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများနှင့်ကမ်းလွန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ startup နိုင်ပါတယ်
ကုန်သွယ်ရေးမစ်ရှင်အလားအလာအေးဂျင့်များနှင့်တိုက်ရိုက်အဆက်အသွယ်၌သင်တို့ကိုငါဆောင်ခဲ့, ဖြန့်ဖြူး, ဖက်စပ်ပါတနာများ, လိုင်စင်ရှိ, နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အစိုးရအဆက်အသွယ်. ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူထိတွေ့ရတဲ့ by, ဒီနိုင်ဂျီးရီးယားကုမ္ပဏီများနှင့်အစိုးရများရန်သင့်အကျိုးစီးပွားကိုယ်စားပြုကူညီပေးနိုင်ပါသည်.
နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကော်ပိုရိတ်ရေးရာကော်မရှင်နှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ခံရဖို့အတှကျဒါဟာမဖြစ်မနေဖြစ်ပါသည် (CAC) တစ်ဦးက Business အမည်အဖြစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီအဖြစ်လည်းကောင်း. CAC ရှေ့ရပျအသိအမှတ်ပြုအဖြစ်, ကျွန်တော်တို့ဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်နိုင်ရန်နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်သင် CAC နှင့်အတူပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်းအကျင့်ကိုပွငျဆငျပွီး file ကိုကူညီခြင်းနှင့်ဥပဒေရေးရာ entity အဖြစ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်.
ကျနော်တို့သင်သည်သင်၏အသိဉာဏ်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုစောငျ့ရှောကျဖို့လိုခငျြကွောငျးသိရ, ကျနော်တို့ကကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှာသငျသညျအဘို့သင့်စီးပွားဖြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုမှတ်ပုံတင်နိုင်ဘာဖြစ်လို့ရဲ့, ကာကှယျစောငျ့ရှောကျနှင့်အတူတူပင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့မူပိုင်ခွင့်များနှင့်ဒီဇိုင်းများ Registry ကို.
5. Obtaining Licence(s ကို)
ကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သောနိုင်ဂျီးရီးယားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးန်ဆောင်မှုအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအေဂျင်စီများအနေဖြင့်လိုင်စင်နှင့်ပါမစ်ရရှိရန်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်, နိုင်ဂျီးရီးယား၏စံအဖွဲ့အစည်းများ, အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်ရေးအမျိုးသားအေဂျင်စီ (NAFDAC), နိုင်ဂျီးရီးယားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပရိုမိုးရှင်းကော်မရှင် (NIPC), နည်းပညာသိမ်းယူမှုနှင့်မြှင့်တင်ရေးတို့အတွက်အမျိုးသားရုံး (NOTAP), နိုင်ဂျီးရီးယားမူပိုင်ကော်မရှင် (NCC), နိုင်ဂျီးရီးယားအကောက်ခွန်ဝန်ဆောင်မှု, နိုင်ဂျီးရီးယားဗဟိုဘဏ် (CBN), စသည်တို့ကို. သငျသညျကို enable လုပ်ဖို့သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများ၏ပြဌာန်းချက်တာဝန်ဝတ္တရားတွေနဲ့လိုက်လျော.
သင်တစ်ဦးအခွန်သက်သေခံနံပါတ်မလိုအပ်လိမ့်မည်ဟုနားလည်မှု (သတင်းအချက်အလက်များ), ထပ်တိုးအခွန် (VAT) နံပါတ်နှင့်အခွန်ရှင်းလင်းခြင်းလက်မှတ် (TCC) အချို့ဖြစ်စဉ်များ e.g execute မှ. ဘဏ်နှင့်အတူတစ်ကော်ပိုရိတ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်, ငါတို့သည်သင်တို့ဖက်ဒရယ်ပြည်တွင်းရေကြောင်းအခွန်ဝန်ကြီးဌာနဝန်ဆောင်မှုအနေဖြင့်တူညီသောရယူကူညီပေးနိုင်ပါသည် (firs), နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ကော်ပိုရိတ်အခွန်တာဝန်ရှိသည်ခန္ဓာကိုယ်အရာဖြစ်ပါသည်. ကျနော်တို့နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ရရှိနိုင်အခွန်မက်လုံးပေါ်တွင်သင်သတင်းအချက်အလက်ပူဇော်နှင့်သင့်အခွန်ပြန် file ရန်သင့်အားကူညီနိုင်သည်.
သငျသညျစီးပွားဖြစ်အာကာသသို့မဟုတ်ရုံးတည်နေရာဝယ်ယူသို့မဟုတ်ငှားရမ်းရန်ရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, ကျနော်တို့ရရှိနိုင် options များနှင့်တကွသင်ကူညီနိုင်ပါတယ်. နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ပြည်မှဝယ်ယူနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပြည်မှတည်ရှိသည်ရှိရာပြည်နယ်သို့မဟုတ်ဒေသန္တရအစိုးရရုံးမှာစုံလင်နေကြတယ်. ကျနော်တို့ကြောင့်လုံ့လဝီရိယထုတ်သယ်ဆောင်နှင့်ပြည်နယ်တရားစီရင်မှုအနှံ့စည်းမျဉ်းလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုငျ.
ဖတ်ရန်ရမည်: နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်မြေယာသို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှုမဝယ်ခင်လုပ်ဖို့အရေးကြီးသောအရာတို့ကို - ထိုပြည်များကြောင့်လုံ့လဝီရိယစစ်ဆေးရမည့်စာရင်း
တင်ပို့သူများ, ရေခြားမြေခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသို့မဟုတ်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများသည်ကိုင်ထားနိုင်ပါတယ် 100% နိုင်ဂျီးရီးယားကုမ္ပဏီအတွက်ရှယ်ယာရှယ်ယာ. သို့သျောလညျး, နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစစ်ဆင်ရေးကို set up လိုသောကမ်းလွန်အဖွဲ့အစည်းများကြောင်းရည်ရွယ်ချက်နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်သီးခြားခွဲထွက်အဖြစ်၎င်းတို့၏နိုင်ဂျီးရီးယားလက်အောက်ခံ၏ဆွဲသွင်းပါဝင်ရရှိရန်လိုအပ်သည်. ရှေ့နေချုပ်တစ်ဦးကို Power မှတဆင့်, ကျနော်တို့ကနည်းမှန်လမ်းမှန်သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွဲများ၏ဆွဲသွင်းပါဝင်၌သင်တို့ကိုကူညီရန်နှင့်နိုင်ဂျီးရီးယားသို့ entry ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်.
ကျနော်တို့ကနိုင်ဂျီးရီးယားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီများမှာ, ကျွန်တော်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၏ကဏ်ဍအားလုံးသွားလာရန်သင့်အားကူညီပေးဖို့ဝမ်းမြောက်လိမ့်မည်, ကော်ပိုရိတ်, ဥပဒေရေးရာ, စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလိုက်နာမှုနဲ့ကြောင့်လုံ့လဝီရိယကိစ္စများ. ရိုးရှင်းစွာအမှာတယ်လီဖုန်း OR WhatsApp ကိုအပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုရောက်ရှိ +234-803-979-5959 သို့မဟုတ် +234-818-701-9206. အီးမေးလ်ပို့ရန်: lexartifexllp@lexatifexllp.com. နောက်ထပ်ကျနော်တို့မှာအကူအညီဖြစ်နိုင်ပုံကိုသင်ယူဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု www.lexartifexllp.com